Labada barnaamijyada u oggolaadaan in aad soo saaro oo ku eegaan xogta gurmad Lugood ah qalab aad iyo eegista soo kabsado cadaymaha cod aad. Waxaa intaa dheer, labada versions of Wondershare Dr.Fone ee macruufka kuu ogolaanaya in aad si toos ah iskaan ceshan cadaymaha cod ka iPhone 4 / 3GS, iPod xiriiri 4 iyo 1 iPad aan files gurmad. Wixii iPhone 5 iyo dadka isticmaala iPhone 4s, waxaad isticmaali kartaa software in ay si toos ah iskaan ceshan faylasha sida xiriirada, fariimaha, qoraalo, jadwalka iyo ka badan oo qoraal ah. Haddii aad tahay Waad aqrinayo dhibaato la mid ah? Akhri xal ah.
Wondershare IPhone Voice Recovery Memo
Kabsado cadaymaha cod tirtiray ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Kabsado cadaymaha cod tirtiray ay si toos ah u baar iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Ceshano cadaymaha cod via Lugood gurmad u iPhone
Ma aha oo kaliya iPhone, iPad iyo sidoo kale taageertaa oo dhan iPod xiriiri 5/4
Waxay bixisaa version tijaabo si ay u helaan isku day ah oo lacag la'aan ah
oo dhan versions iPad ay ka mid yihiin iPad Air, iPad mini bandhigay isha, iPad mini, iPad bandhigay isha, iPad cusub, iPad 2, iPad 1
Content Text (8 nooc): Xiriirada, Messages (SMS, iMessages & MMS, oo ay ku jiraan Emoji), wac taariikhda, Calendar, Notes, wada hadalka WhatsApp, waano, Safari bookmark
Content Media (7 nooc): Camera Roll (Photo & Video), Photo Library, Photo Stream, lifaaqyada Message, Voice Deymaha maqan, farriinta, lifaaqyada WhatsApp
WhatsApp wada hadalka / xirnaantooda iyo farriinta codka hadda waxa kaliya ee ay taageerto version Mac ah.
Kabsado via Lugood
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan
Kabsado iPhone Voice cadaymaha in 2 Siyaabaha
Tallaabada 1. baarista iPhone ama Macdan gurmad Lugood faylka
Burcad barnaamijka andc xiriiriyaan iPhone (macruufka 9 taageeray) in kombiyuutarka, waxaad arki doonaa suuqa kala aasaasiga ah sida soo socota. Waxaad si fudud u riixi kartaa ka Start Scan badhanka si aad u hesho iPhone marsiiyey.
Ama, waxaad dooran kartaa in kabsado Lugood ee kaabta File , hab kabashada kale oo ay bixiyaan Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Markaasaa Lugood aad files gurmad si toos ah la marsiiyey doonaa oo soo bandhigay sida soo socota. Dooro mid ka mid ah u qalab aad, ka dibna riix Start Scan Macdan ka kooban.
Tallaabada 2. Check oo soo kabsado cadaymaha cod la tirtiro
A yar ilbiriqsi ka dib, dhammaan waxa ku jira ee aad gurmad file la soo saaro doonaa oo ku qoran qaybaha. Dooro Voice cadaymaha oo baadh kuwii files M4A. Deymaha maqan cod Mark aad rabto in aad soo kabsadaan oo ka dhacay on "Ladnaansho" in ay iyaga oo dhan la badbaadiyo on your computer.
Sidoo kale, waxaad soo kaban karto waxyaabaha kale sida sawiro, videos, xiriirada, fariimaha, iwm ka gurmad file, haddii ay jirto baahi loo qabo.
Haddii aad tahay qof user Windows ah, u isticmaalaan Wondershare Dr.Fone ee macruufka iyo qabtaan tallaabooyinka la mid ah dib u soo ceshano cadaymaha cod aad, ama waxaad isticmaali kartaa barnaamijka si toos ah baarista iPhone 4 / 3GS, iPod xiriiri 4 ama iPad 1 inuu ka soo kabsado cadaymaha codkii aan Lugood gurmad.
iPhone Bookmark Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Bookmarks on iPhone
Sida loo soo ceshano tirtiray looduubay oo iPhone
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka
> Resource > Ladnaansho iPhone Data > Sidee inuu ka soo kabsado Voice cadaymaha ka iPhone / iPad / iPod taabashada